10-Ka Waddan Ee Adduunka Ugu Taariikh Weyn, Tirada Sannadaha Ay Jireen Iyo Xaddaaradahooda Guunka Ah – Q2aad - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle 10-Ka Waddan Ee Adduunka Ugu Taariikh Weyn, Tirada Sannadaha Ay Jireen Iyo...
Masar (Hoygii Xadaaradda Dunida) – 5116 Sano
Dalka Masar waxa lagu tilmaamaa mid ka mid ah waddamada ugu faca weyn adduunka uguna taariikh fog iyada oo taariikhyahanada qaar kuba doodayaan in Masar tahay halkii aadamuhu ka soo bilaabmay ama meel la dego dhulka guudkiisa ay tahay meeshii ugu horraysay ee aadamuhu dego oo ay ka soo bilaabanto xadaaradda adduunku.
Taariikhyahanadu waxa ay sheegayaan in Fircoon Naarmir oo ka mid ahaa faraacinadii reer Masar waliba kuwoodii ugu horreeyey uu ahaa kii mideeyey gobolada dalka Masar ee dhinaca sare iyo dhinaca hoose, 3100 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise (CS) iyada oo wakhtigaasi Masar laba daamood juquraafi ahaan kala ahayd oo ah dhulka joogga sare iyo dhulka joogga hoose.
Raadadka yaalla dalkaasi Masar ayaa caddayn u ah taariikhda faca weyn ee ay jirtay. Waxaana la rumaysan yahay in ay jirtay 5116 Sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise.
Vietnam – 4895 Sano
Vietnam oo qaaradda Asia ku taalla ayaa iyana la isku raacsan yahay in ay ku duuggan tahay taariikh fac weyn oo kumannaan sano ka soo wareegtay. Dalka Vietnam waxa la sheegaa in qabaa’il lagu magacaabo Fan Lang ay deganaayeen dhulkaaasi 2879 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise Calaysi Salaam, kuwaasi oo qaab dhismeedka Vietnam sidaa u diyaariyey.
Waxa la sheegaa in xadaaradda dalkaasi leeyahay lagu aqoonsan yahay raadadka iyo dhismayaasha ku yaalla dalkaasi iyo waliba agabka lagaga tagay ee quruumihii hore isticmaali jireen.
Waxa dalkan dhibaateeyey dalka Japan oo dagaalkii labaad ee dunida qabsaday kuna soo duulay kaasi oo in ka badan malaayiin agab taariikheed ah ka bililiqaystay.
Kuuriya – 4349 Sanadood
Khubarada taariikhdu waxa ay sheegaan in dalka Kuuriya oo wakhtigan u kala qaybsan labada Kuuriyood ee Woqooyi iyo Koonfur la aasaasay 2333 sano muddo haatan laga joogo oo ah ka hor dhalashadii Nabi Ciise Calaysi Salaam wakhtigaasi oo uu dalkaasi ka talin jiray boqor lagu magacaabo Dangom.
Qarniyadii dambe ee taariikhda adduunka waxa dalkan loo kala qaybiyey laba qaybood kuwaasi oo dhawr jeer dagaalo qadhaadhi dhex mareen. Waana ka hor intii aanay Kuuriya gacanta u galin Ruushka iyo Mangooliyiinta. Kadib dagaalkii labaad ee dunida waxa dalkan loo kala qaybiyey labada kuuriyood ee Koonfur iyo Woqooyi.
Raadadka taariikheed, agabka qadiimiga ah iyo xadaaradda dadka Kuuriya ayaa tilmaamaya taariikhda faca weyn ee dalkan oo la sheego in uu yahay dalkii afraad ee adduunka ugu taariikh weynaa.
Shiinaha – 4016 Sano Ka Hor Ayaa La Degay
Dalka Shiinaha oo ay ku uumman yihiin shucuubta adduunka ugu tiro badani waxa la sheegaa in uu yahay ama safka hore kaga jiro goobaha adduunka ugu taariikh weyn iyada oo dadka dalkaasi isu haystaan in ay yihiin kuwii laga soo tafiirmay dhulkooduna yahay kan aduunka kala badha ama ugu taariikh weyn.
Waxa taariikhda lagu sheegaa in dalkaasi ay aasaaseen qoys lagu magacaabo Qoyskii SHIA kuwaasi oo dhulkaa deganaa in ka badan 4-kun oo sanadood ka hor. Sannadkii 221 tirsiga Miilaadiga waxa ay qoyskii SHIA mideeyeen goboladii iyo tuulooyinkii dadku deganaa ee dalkaasi Shiinaha kuwaasi oo u qaabeeyey sidan uu haatan yahay.
Sidoo kale ugu dambayn 1949-kii ayay dalka Shiinuhu qaabka uu hadda u dhisan yahay ugu dambayn u qaabeeyeen waxaana la tilmaamaa in dhulka Shiinuhu yahay dhul aad u fac weyn taariikh ahaan.
Dhaqankooda, raadadka guryaha ay galaan, agabkooda taariikheed iyo deegaamada qaar waxa la sheegaa in ay yihiin kuwo mucjiso ah oo aad garan karto in kumannaan kun oo sano ka hor dadkaasi ahaayeen xadaarad jirta oo guun ah.
Somaliland: Daawo Madaxweyne Siilaanyo Sidi Logu Soo Dhaweyey Gobolka Saaxil
RASMI: Kooxda Borussia Dortmund Oo Si Rasmi Ah Ugu Dhawaaqday In Mats Hummels Uu Kooxdiisa Ka Dalbaday In Uu Ku Biiro Bayer Munich Iyo Kooxihii Kale Ee Doonayay Saxiixa Hummels Oo Guuldaraysana
Ruushka Oo Gacanta Ku Dhigay Bisad Taleefaanada Gacanta U Tahriibin Jirtay Maxaabiista Ku Xidhan Xabsiyada Dalkaasi